Wararka Maanta: Khamiis, Oct 10, 2019-Biden oo ku baaqay xil ka-xayuubinta Trump
“Si loo ilaaliyo dastuurkeena, dimqoraadiyadeenna, iyo sharafteena aas-aasiga ah, waa in xilka laga qaadaa” ayuu Biden u sheegay weriyayaasha oo uu kula hadlay gobolka New Hampshire, isaga oo codkiisa ku biiriyey musharaxiinta kale ee dimoqraadiga.
“Waxa uu dal-daloollo u yeelayaa dastuurka, mana ogolaan karno inuu taas ku guuleysto” ayuu yiri Biden.
Hase yeeshee Trump ayaa saadaaliyey in Maxkamadda Sare ee Mareykanka ay noqon doonto midd xalka ugu dambeeya ka gaarta dagaalkan siyaasadeed.
Trump oo diiday in Aqalka Cad uu dimqoraadiga kala shaqeeyo barista xil ka-xayuubin ee ay wadaan, ayaa sheegay in xisbigiisa Jamhuuriga “loola dhaqmay si xun.”
Dhinaca kale, ra’yi uruurin uu sameeyey taleefishinka Fox News ee inta badan loo arko inuu madaxweynaha taagero, ayaa muujisay in 51% dadka ay doonayaan in Trump xilka laga xayuubiyo.